“Street Woman Fighter” show ကို Idol Version နဲ့ ရိုက်ဖို့ ပရိသတ်တွေ ထင်ကြေးပေးနေတဲ့ Kpop female idol (13) ယောက်
Mnet က လွှင့်နေတဲ့ “Street Woman Fighter” survival show ဟာ ခုဆို Korea မှာရေပန်းအစားဆုံး hottest အဖြစ်ဆုံး show ဖြစ်နေပါတယ်။ ထို အစီအစဉ်မှာ တောင်ကိုရီးယားကိုယ်စားပြု မိန်းကလေး အကအဖွဲ့ဖြစ်ဖို့ Girl Dancer 8 ဖွဲ့က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြိုင်ဆိုင်ရမှာပါ။
ထို 8 ဖွဲ့ဟာ YGX, LACHICA, WANT, WAYB, CocaNButter, ProudMon, HolyBang, and HOOK ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့တိုင်းမှာပါတဲ့ Dancer တွေဟာ တကယ့်နာမည်ကြီးတွေဖြစ်ပြီး တချို့ဆို Global အဆင့် အကသမားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရှားရှားပါးပါး Kpop Idol တစ်ယောက် ပါဝင်ပါတယ်။ သူမကတော့ IZ*ONE အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Lee Chae Yeon ဖြစ်ပြီး WANT အဖွဲ့မှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နေပါတယ်။
သူတို့ကို အကဲဖြတ်ပေးတဲ့ ဒိုင်တွေကတော့ Kpop Queen ဖြစ်တဲ့ BOA, NCT အဖွဲ့ရဲ့ Leader ဖြစ်သူ Taeyong နဲ့ Performance ဒါရိုက်တာ Hwang Sang Hoon တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Guest တွေအနေနဲ့ PSY, CL, Weki Meki အဖွဲ့ဝင် Choi Yoo Jung, LOONA အဖွဲ့ဝင် Yves, Lee Young Ji နဲ့ Girls’ Generation အဖွဲ့ဝင် Sooyoung တို့ ပါဝင်မှာပါ။
ခုပြိုင်ပွဲဟာ Kpop အဖွဲ့တွေရဲ့ ကကွက်ဖန်တီးသူ အကပညာရှင်တွေ၊ Back up dancer တွေပြိုင်ကြတာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ အရည်အချင်းကို Mnet ကနေ ပွဲထုတ်ပေးလိုက်တာပါ။ ခုဆို သူတို့ဟာ Variety show တွေပါ ဖိတ်ကြားခံရတဲ့ အဆင့်ပါ ဖြစ်နေပါပြီ။ သူတို့အတွက် တကယ် ဝမ်းသာစရာပါ။
အကယ်၍ ခုလို အောင်မြင်နေတဲ့ “Street Women Fighter” show ကို Kpop idol တွေနဲ့ ရိုက်ရင် ပိုပွဲစည်မယ်ထင်ပါတယ်။ K netizen တွေကတော့ ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ လိုက်ဖက်မယ်ထင်တဲ့ Kpop idol တွေကို vote ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့ရှိပြီး Dancing ပိုင်းမှာ အရမ်းတော်ကြတဲ့ idol တွေကို မဲပေးထားကြတာပါ။ သူတို့နှစ်သက်ရာ တွဲပေးထားတဲ့ အဖွဲ့ (၃) ဖွဲ့ကို Asia Cele Bar ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Team A candidates:
1. Girls’ Generation’s Hyoyeon
2. CLC’s Seungyeon
3. (G)I-DLE’s Soyeon
4. Red Velvet’s Seulgi
Team B candidates:
1. 2NE1’s Minzy
3. Oh My Girl’s YooA
4. fromis_9’s Hayoung
Team C candidates:
2. TWICE’s Momo
3. ITZY’s Ryujin
4. Weki Meki’s Choi Yoo Jung
5. Kim Chung Ha
K netizen တွေကတော့ သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Kpop female idol (13) ယောက်ကို ခုလို အဖွဲ့(၃)ဖွဲ့ …ဖွဲ့ပြီး ယှဉ်ပြိုင်စေချင်ကြပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးတို့ကရော ဘယ်သူတွေကို တစ်ဖွဲ့တည်းဖွဲ့ပြီး ယှဉ်ပြိုင်စေချင်ကြပါသလည်း။ cmt မှာ ရွေးချယ်သွားကြပါအုံးနော်။
Next သမီးလေးမွေးပြီးမှ ကျရောက်လာတဲ့ ပထမဆုံးမွေးနေ့မှာ Surprise လုပ်ခံလိုက်ရတဲ့ Mew Nittha »
Previous « ရိုမန့်စ်ဇာတ်လမ်း မကြိုက်သူ​တွေ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ထွက် ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ (၆) ခု
မြန်မာလို ပီပီသသ “မင်္ဂလာပါ” လို့ နှုတ်ခွန်းဆက်ခဲ့တဲ့ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Lisa
Agust D အဖြစ် “Daechwita” သီချင်းနဲ့ စံချိန်တင်စာရင်းဝင်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ Suga
ပြသခွင့်လိုင်စင်ကျပြီဖြစ်လို့ ကြည့်ဖို့ အားခဲထားရတော့မယ့် “Novoland: Pearl Eclipse”
Home Town Cha Cha ထဲက မင်းသမီးလေးအတွက် Coffee Truck ပို့ပေးခဲ့တဲ့ IU